तपाईंको वर्तमान जीवनको लागि जीवन-बचत जानकारी: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
तपाईंको वर्तमान जीवनको लागि महत्वपूर्ण जानकारी
मा दायर सिमुलेशन	by मार्टिन भिजल्याण्ड	22 जुलाई 2019 मा	• 19 टिप्पणिहरु
यो सपना सपना संसारबाट बाहिर निस्कने र यसको लायकको लागि तपाईंको वरपर संसारलाई हेर्ने समय हो। यसले तपाईंको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनेछ। यसैले म तपाईंलाई रिचर्ड थियमे (यस लेखको धेरै तलमा प्रस्तुतीकरण) को तल प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ, एक पूर्व पुजारी जसले आफैलाई एक प्रभावकारितामा परिवर्तन गरेको छ र आर्थर अन्डरसन, एस्सेटेट बीमा, जनरल इलेक्ट्रिक, राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) ), माइक्रोसफ्ट, र संयुक्त राज्य अमेरिका को खजाना विभाग। यो प्रस्तुतिकरण मूलतया भन्छ, आज तपाईलाई दुनियालाई बुझ्न सबै केहि आवश्यक छ।
यदि तपाईं मेरो लेख अनिवार्य मानिस (र यस सिमुलेशनको बिल्डर द्वारा संचालित अवतारहरू) को बारेमा पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि रिचर्ड थियमीको पछिल्लो समूहको रूपमा प्रमुख पात्रहरू। नयाँ पाठकले अन्तिम वाक्य पछि हटाउन सक्दछ, तर म सिफारिस गर्छु कि तपाइँ के सोच्नु भएकोमा ठीक छ यहाँ अध्ययन गर्नुहोस् र किन धेरै धेरै ब्यान्ड र वैज्ञानिकहरू वर्तमानमा हामी सिमुलेशनमा बस्छौं भनेर बताउँछ। यो केहि छैन को लागि र यो निश्चित रूप देखि विचारयोग्य छ। म पनि यो दावी गर्दछु आवश्यक छ आजका घटनाहरू बुझ्न; जान्न कहाँ पठाइन्छ र यो पत्ता लगाउन पनि को लागी सूची र फेब्रुअरी भाप ट्रेनको बारेमा के गर्न सकिन्छ जुन मीडिया र राजनीतिमा देख्न सकिन्छ। वा पनि:
यस विषयमा delving गरेर तपाईंले संसारमा सबै समस्याहरूको सार पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ र समाधान पनि देख्नुहुनेछ।
रिचर्ड थियमे को उद्घाटन वाक्य 2015 बाट यस Def Con हैकर्स कन्फिगरेसनको समयमा (तल भिडियो हेर्नुहोस्) त्यसैले राम्रोसँग विश्लेषण गर्दैछन्। कृपया ध्यान दिनुहोस्: यो प्रस्तुतीकरण चार वर्षको अवधिमा छ, यसैले थियमी द्वारा वर्णन गरिएका टेक्निकल घटनाक्रमको क्षेत्रको अवस्था, अहिले नै चाँडै पुरानो छ भने हामी मोरको कानमा ध्यान राख्छौं। तर, केही अनुसार, मोरिश कानून अब वैध हुनेछैन, यो चिप्स को क्षेत्र मा मापन को कमी को अन्त को लागि थिएन (अप्रत्यक्ष ट्रांजिस्टर पैमाने मा कमी को घटनाहरु जो मूर को कानून को आधार मा राखी) मा प्रगति को लागि रास्ता बनाउन को लागि तंत्रिका सञ्जालहरूको क्षेत्र (जसलाई मोरको व्यवस्थाले बनाएको मान्य मानिन्छ)।
तंत्रिका सञ्जालहरू हाम्रो दिमागको प्रकार्य प्रतिलिपि गर्न प्रयास गर्छन्। हाम्रा दिमागहरू जन्मबाट प्रशिक्षित हुन्छन् र हाम्रा शिक्षकहरूले हामीलाई बिदा गर्दा हामी बिरालो हेर्नुहोस् वा कुनै अन्य शब्दको अर्थ के हो। हामी मानवहरू 'डेटा सेट' बाट जान्दछौं कि हाम्रा आमाबाबु र शिक्षकहरूले हामीलाई सिकाउँछन्। एक तंत्रिका सञ्जाल डेटा सेट प्राप्त गर्दछ जुन यसले प्राप्त गर्दछ। त्यो डेटा सेट पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षित हुनु पर्छ यो प्रशिक्षित गर्न। जॉन हेनेसी, अमेरिकन कम्प्यूटर वैज्ञानिक, अकादमीय, व्यापारी र वर्णमाला इंक को अध्यक्ष (Google) बताउँछ यो प्रस्तुति AI र तंत्रिका सञ्जालहरूको महत्त्व र विधि।
तपाइँ यस प्रस्तुतीकरणबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ कि कति डेटा सेटहरू महत्वपूर्ण छन्। यदि तपाईं अहिले धेरै व्यक्तिहरूसँग विस्तार गर्नुहुन्छ भने अर्थात् स्नैपचाट, इन्स्टाग्राम र अन्य सामाजिक सञ्जाल स्रोतहरू सबै प्रकारका आदीहरू, जसमा डेटा सेटहरू लगातार उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ संसार वास्तवमा एक ठूलो 'निरीक्षण गरिएको डेटा सेट' परिवर्तन भयो। तपाईं र म डेटा सेट प्रदान गर्छु जसले AI प्रशिक्षित गर्दछ।
हेनिसी को प्रस्तुतीकरण पनि पुरानो छ, किनभने फेसबुकले एआई विकसित गरेको छ जुन सुपर मेगा कम्प्यूटरको सट्टा Google वर्णमा रहेको सरल पीसीमा काम गर्न सक्छ जुन कुनै पनि समय र सबै जटिल गेम गेमलाई थाहा छैन। संसारमा उत्कृष्ट खेलाडी। फेसबुक एआई प्रणाली विकसित गरियो (Pluribus भनिन्छ) त्यो समय र फेरि6बाट ठूलो पोकर खेलाडीहरूलाई हराउन सफल भयो। यसैले यो एअरले जटिल विजय परिणामहरूको माध्यमबाट धेरै खेलाडीहरूलाई धकेल्छ। गो जस्तै खेल ए ए को लागि अपेक्षाकृत सजिलो छ, यस तथ्यको बावजूद कि सम्भावित ब्रह्मा मा परमाणुहरू भन्दा धेरै बोर्ड संयोजनहरू छन् (किनभने सबै जानकारी कम्तीमा हेर्न उपलब्ध छ)। यसले AI को प्रशिक्षित गर्न सजिलो बनाउँछ। यो पोकरको लागि फरक छ, किनकी तपाईं धेरै खेलाडीहरूको ब्लफ कारकसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण फेसबुकले निम्न कथन सुरु गर्न मन लाग्यो:
"हामी एक सुपर मानव स्तरमा भन्न भन्न सुरक्षित छ र यो परिवर्तन हुने छैन।"
हामी 2019 हौं र प्रविधिमा विकासहरू चाँडै जाँदैछौं। NVIDIA, खेल उद्योगको लागि ग्राफिक्स कार्ड विकासकर्ता (अब चलचित्र उद्योग भन्दा धेरै ठूलो छ) पहिले नै नैतिक सञ्जाल सिर्जना गरेको छ जुन यसले बालबालिकालाई सरल बनाउन सक्छ। deepfakes गहिरो वातावरण बनाउनुहोस् र उत्पन्न गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं शायद सम्भावना संग रहन सक्नुहुनेछ, तपाई सोच्नुहुन्छ।
यदि रिचर्ड थियमीले प्रविधिको बारेमा तलको प्रस्तुतीकरणमा बोल्छ भने पहिले नै ज्ञात भए पछि, तपाईं अब हामी कहाँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अधिकतर मानिसहरू अझै पनि सोच्छन् कि हामी स्काईफाईको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र चलचित्रहरू वा नेटफिक्समा ब्ल्याक मिरर सीरीजलाई बुझाउँछौं। यो समय यो छ कि तपाईंले हेर्नु भएको सबै कुराहरू जुन तपाईंले सोच्नुभएको थियो विज्ञान कथा पहिले नै एक तथ्य हो।
In यो लेख मैले आफ्नो कम्पनी नेरलिनको एलोन मास्कको प्रस्तुतिलाई उल्लेख गर्दछु, जसले इन्टरनेटमा वायरलेस जडानको लागि मस्तिष्क-कम्प्यूटर इन्टरफेसहरू बनाउँछ र इन्टरफेस सञ्चालन गर्न अनुप्रयोग बनाउँछ। यदि तपाइँ थियमी प्रस्तुति तल हेर्नुभयो भने, तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि 2015 मा कार्यहरु को वास्तविक टेकनिकल अवस्था धेरै अगाडी थियो। DARPA मा तिनीहरूले प्रत्यारोपण बिना मानव मस्तिष्क हेरफेर गर्न सक्षम छन्। एक शोध क्षेत्र मध्ये एक यादहरु को रिकभरी, सम्झनाहरु देखि भावनात्मक आरोप को हटान, विशिष्ट सम्झनाहरु को हटान, यादहरु को सामाग्री को परिमार्जन र नयाँ सम्झनों को प्रत्यारोपण। अर्कोलाई दूर दिमाग पढ्न र जानकारी हटाउन कोसिस गर्दछ। अर्कोले सोच, भावना र व्यवहारको ढाँचा बुझ्न र दोहोर्याउन डीएनए को प्रयोग को लागी अन्वेषण गर्दछ। अर्को कुरा दिमाग-मन-दिमागी संचार, रिमोट अवलोकन (अर्को आँखा र दिमागको माध्यमबाट) को लागी, साथसाथै प्रत्यारोपण र गैर-आक्रामक प्रविधिहरू जसले दिमागको विद्युत चुम्बकीय ऊर्जालाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि psychokinesis, clairvoyance र telepathy सक्षम पार्छ।
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कुन विस्तृत 'तंत्रिका सञ्जाल' एलन मस्कको तंत्रिला हुनेछ यदि लाखौं मानिसहरूले क्लाउडमा आफ्नो दिमागलाई फाँट गर्ने निर्णय गर्नेछन्? तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि कस्तो अवस्था हामी पहिले नै छौं जब यी गैर-आक्रामक प्रविधिहरू मस्तिष्क हेरफेर गर्न (जब पहिले नै रिचर्ड थियमेको अनुसार अवस्थित छन्) 5G सञ्जालसँग संयुक्त छन्?
रिचर्ड थियमीले हाम्रो मानव शरीरको जीवनी जीवविज्ञान र जीवित जीवहरूको जीवविज्ञानको सन्दर्भमा राज्यको अवस्था पनि बताउँछ। म यहाँ साढे वर्षको वेबसाइटमा वर्णन गरिरहेको छु, हाम्रो जीव विज्ञान गणित र एक डाटाबेस मुद्दा हो। एआय, सोशल मिडिया र जस्तै न्युन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा स्टेम सेल ज्ञान र म्याप मानव मानव जीनोमको माध्यमबाट ठूलो डाटा संग्रह (डाटा सेट जसबाट तंत्रिका नेटवर्क सिक्न सकिन्छ) अंग र अंगहरू। थियमीले जोर दिन्छ कि हामी वैज्ञानिक प्रकाशनमा के देख्छौं कम्तिमा पाँच वर्ष पछि DARPA जस्तै संस्थाहरू पहिले नै कार्यरत छन्। बन्दरको टाउकोको प्रत्यारोपण दश वर्ष अघि सम्भव थियो। यसबाहेक, मस्तिष्कको कोशिकाहरूमा प्रयोगशालामा बृद्धि गरिन्छ र जीवित चूहोंको तंत्रिका सञ्जालहरू र बन्दहरू बन्द गरिन्छन्।
मानिन्छ कि मानव मस्तिष्कमा 80 अरब न्यूरोन्स, सबैभन्दा ठूलो तंत्रिका सञ्जाल हो जुन प्रमुख टेक कम्पनीहरु, सरकारहरू र तिनीहरूको संस्थाहरू (जस्तै DARPA) मा उपलब्ध हुन सकिन्छ, मानव मस्तिष्क हो।
मानव बायो-अवतार र एअर कार्यक्रम जसले मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्दछ
हामी एक सिमुलेशनमा बस्छौं सुरूवात बिन्दुमा जानुहोस् (जहाँ उल्लेख गरिएको छ कि तपाईं कहिल्यै "इन" र सिमुलेशनमा बाँच्न सक्नुहुन्न, तर धेरै अनुकरणको साथमा सिमुलेशनको साथ, जस्तै प्लेस्टेशन गेम प्लेयर पूर्ण रूपमा खेलमा आफैं हराउँछ।), त्यसपछि मानव शरीर खेलमा अवतार भन्दा बढी छैन र मानव मस्तिष्क त्यस अवतारको एक जैव प्रोसेसर हो, जसमा एक तंत्रिका नेटवर्क सिकाउने प्रक्रियाले AI प्रशिक्षित गरेको छ। मा यो लेख मैले विस्तारमा त्यो स्थिति वर्णन गरेको छु।
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले माथिको कथनको सार को खोज्नु भएको छ। तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाई मर्नु भएको व्यक्ति हो जुन तपाईं मिररमा हेर्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो जैव-अवतारको आँखा (यो सिमुलेटेड वास्तविकतामा सिमुलेटेड व्यक्ति) को नजरमा हेर्नुहुन्छ, तर वास्तविक दर्शक यो सिमुलेशन बाहिर छ (जस्तै प्लेस्टेशन प्लेयर सोफेमा बसेर आफ्नो हातमा नियन्त्रक संग बस्छ)।
यसको राम्रो लाग्न सक्छ डबल स्लेट प्रयोग भौतिकवादी नील्स बोहरबाट, यो देखाउँछ कि जब एक पर्यवेक्षक हो भने मात्र मात्र अवस्थित छ। धेरै लेखहरूमा मैले व्याख्या गरेका छु कि हामी पहिले नै "सिमुलेशनमा बस्न सक्छौं"। तपाईं राम्रो सुरुवात गर्नुहुन्छ भने यो लेख राम्रो तरिकाले पढ्नुहोस्, 'सिमुलेशन' मेनु वस्तुको अधीनमा हेर्नुहोस् वा खोज फिल्डमा शब्द 'अनुकरण' प्रविष्ट गर्नुहोस्। म त्यस परिचयलाई यहाँ पछ्याउन छोड्छु र त्यसोभएको धारणाको कारणलाई सीमित गर्दछ जुन हामी पहिले नै "सिमुलेशनमा बस्न सक्छौं"। म जानबूझकर यो उद्धरण चिह्नहरूमा राख्दछु, किनभने तपाईं सिमुलेसनमा बाँच्न सक्नुहुन्न, तर केवल यसमा पूर्ण विश्वास पाउन सक्दछ, तर वास्तवमा बुझ्न र बाहिर (बाहिरबाट) प्ले गर्नुहोस्।
यदि हामी सिमुलेशन खेल्दैछौं भने, त्यहाँ मूल वर्णको साथ एक 'आत्मा जडान' जस्तै हुनुपर्छ जस्तै 5G वायरलेस Neuralink जडान, उदाहरणको लागि, यदि तपाईं 2045 मा एक सिमुलेशनमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने जस्तो देखिन्छ। त्यसोभए 'आत्मा जडान' हो त्यसैले 'मूल व्यक्ति' सँग सञ्जाल जडान छ। अनुकरणमा तपाईंको अवतार 'प्रेरित' हो र बाह्य रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ। मा यो लेख म विस्तारमा वर्णन गर्दछ कि कस्तो प्रेरणा हो र तपाईं त्यहाँ वरिपरि अनन्य गैर प्लेइजिङ क्यारेक्टरहरू (एनपीसीहरू) मात्र होइन, तर यो पनि हो कि बिल्डर (वा 'बिल्डर टोली') सिमुलेशनद्वारा नियन्त्रण गरिएको अवतार। त्यो लेख पढ्दा "आत्मा" वा "चेतना" को अवधारणाको राम्रो बुझ्न मद्दत गर्दछ।
दोहरीवादी लुसिफरियन भाइरस अनुकार
म पाठकको ध्यान रिचर्ड थियमीको उद्घाटन शब्दमा तल प्रस्तुतीकरण गर्न चाहन्छु। मेरी राय मा, यी शब्दहरु एक क्रिस्टल स्पष्ट संकेत हो कि यस अवतार (रिचर्ड थिई) को 'बिल्डर टीम' द्वारा संचालित गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, पहिलो 20 सेकेन्डहरूमा उनले शब्दहरू बोल्छन् जस्तै "बच्चाहरू अचम्मको बोली" किनभने उनी जान्छन् कि यो प्रशिक्षणमा अवतार हुन्; लुकाफेरियन टीम द्वारा संचालित अवतार (यस सिमुलेशन को बाहिर)। छोराछोरीले अक्वाट्यूटलाई अब 'राम्रो र खराब' को सम्पूर्ण स्पेक्ट्रममा महत्वपूर्ण पदहरू दिन्छन्। यी शब्दहरूले तपाईंलाई राम्रोसँग घुसाउँछन्, किनकी उसले यहाँ केहि सेकेन्डमा वर्णन गर्दछ कि यो सिमुलेशन राम्रो देखि बुराईबाट (द्विवादवाद, यिन / वायु, जस्तो / दायाँ, ईसाई / मुस्लिम, प्रोग्रामरहरू / हैकरहरू) र सबै आकार दोहोर्याएर दोहोर्याउनु हो)। उनीहरूले पनि यसो भनेका छन् कि "यो बच्चाहरूले अयोग्य बोली" यो शताब्दीका "सोचेका नेताहरू" हुनेछन्। र त्यो त्यो भयो।
28e सेकेन्डबाट, उनले यो 'अवतार' (मैले तिनीहरूलाई बोलाएर) महत्त्वपूर्ण पदहरू कब्जा गरे र अन्तरिक्ष सिर्जना गरेका छन् भनेर व्याख्या गरेर जारी राखेको छु,आईटी स्पेस वा सुरक्षा वा असुरक्षा ठाउँ हामी सबै नै बस्छौं"। वास्तवमा यी शब्दहरूमा उहाँ आफ्ना श्रोताहरूलाई बताउनुहुन्छ कि तिनीहरूले बेग्लै कुरा जान्दछन् (किनभने उनी लूक्सफरियन अवतार टोली हुन्), तर के तपाई र मलाई वास्तवमा हाम्रो माध्यमबाट प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईं बस्नुहुन्छ आईटी स्पेस ड्यूटी (सुरक्षा र असुरक्षा)। तपाईं सिमुलेशनमा बस्नुहुन्छ।
औसत श्रोता अझै पनि प्रतिक्रिया दिन सक्छ: "कुनै मित्र छैन, उहाँले हैकर्स सम्मेलनमा बोल्नुहुन्छ र यो कम्प्युटर र इन्टरनेट वा कम्पनी सञ्जाल र यस क्षेत्रमा सुरक्षा र असुरक्षित बारेमा मात्र छ।"। यद्यपि, यदि तपाईं सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरणले तपाईंलाई घुम्न दिनुहुन्छ भने, तपाईंले कहाँ पत्ता लगाउनुहुनेछ थिये Echt बोल्छ। केवल 40e दोस्रोबाट सुनो जसले उनी आफ्ना पूजाहारी शब्दहरूलाई दोहोरिन्छ: "प्लेटफर्म सिर्जना गर्यो जसमा हामी बस्छौँ "। पछ्याउने सबै नतिजाहरू दिमाग उचाइरहेका छन् र थियम धेरै खुल्ला हुन्छन् र ठूलो समूहले सामूहिक खेल्दा बाटोमा घमन्ड गर्दछ र अपमानित राखिएको छ।
3 मिनेटको सम्पूर्ण परिचय अज्ञातहरूसँग फटिरहेको छ, जसमा 2: 45 मिनेट समावेश गर्दछ, जसमा उनले यसो भने: "यो प्रस्तुतीकरणले तथ्यलाई सामना गर्न खोजिरहेको छ कि मानवहरू सूचना र ऊर्जाको खुला प्रणाली हो"। यो तपाईंको लागि समय हो र म चीजहरू हेर्न चाहन्छु जुन तिनीहरू हुन्। विज्ञान पुरा जीव विज्ञान को एक सूचना प्रणाली को रूप मा जान्छ। यो एक सूचना प्रणाली हो। यो कार्यक्रम हो। यो एक एएन कार्यक्रम हो। सटीक हुन, सिमुलेसन। सडक नक्सा जसमा हामी अहिले बसिरहेका छौ, जसमा यो सिमुलेशनको बिल्डरले नयाँ सिमुलेशन निर्माण गर्न व्यस्त छ: एक अनुकरण-इन-ए-अनुकरण यो लेख.
किन हामी सिम्युलेशन-इन-ए-सिमुलेशन निर्माणको लागि बाटोको नक्सामा हो? नियंत्रण दल - अवतार जो लुसिफरियन बिल्डर्स टीम (बाहिरबाट) द्वारा नियन्त्रित छन्। - तपाईं र म चाहन्छु कि हाम्रो जैव-अवतार (हाम्रो मानव शरीर) को त्रासमुक्तिवाद लाई ए.एन. संग मिलन को समर्पण गर्न को लागी। यस सन्दर्भमा यो वास्तवमा बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं कौन हुनुहुन्छ र यसको लागि तपाईंले अस्तित्वको सबै चीज (अस्तित्वको) को माध्यमबाट हेर्नु भएको छ। मा यो लेख हल्का म हाम्रो अस्तित्वको 'स्टेम सेल' गर्छु। तपाईले पढ्नु भएको छ भने तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि अस्तित्वको सेल स्टेम - जानकारीको सबै समावेशी प्रवाह --ले एकल व्यक्ति इकाई प्रपत्र (जस्तै स्टेम सेल आकारको कक्षमा प्रत्येकको एक व्यक्तिको गठन मिशन छ) को आकार दिएको छ। । प्रत्येक व्यक्तिगत कक्षमा यसको अनन्य विशेषताहरू छन् र यसको गठन मिशन छ। शरीरमा, एक सेल फारम आँखा र विकासको लागि एक हृदयमा विकास गर्न र अर्कोमा विकास गर्न। तपाईंको मूल फारम (जुन यी सिमुलेशनहरू प्ले गर्दछ / प्ले गर्दछ) हो त्यसैले चेतनाको पहिलो रूप हो; तपाइँको पहिचान। यो तपाईंको प्रेमीको प्रामाणिक एकल रूप हो।
सिमुलेशन जुन हामीले हेरौं हामी सबै भन्दा राम्रो भाइरसको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा, हामी बहुभाषी भाइरस सिमुलेसनमा साक्षी (पर्यवेक्षक / खेलाडी) हो। धेरै विशिष्ट (पढ्नुहोस सबै प्रतीक र घटनाहरु) हामी लुसिफरियन भाइरस सिमुलेसनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। एक भाइरस को विशेषता यो हो कि यो आक्रमण गर्न को लागी र शरीर को माथि ले लो। मेरो विचारमा, यो यो भाइरस सिमुलेशनको बिल्डरको पनि योजना हो। भाइरस प्रणालीको वरिपरि 'सबै चीजहरूको स्टेम सेल' बनाइएको छ; घुसाउनुहोस्, संक्रमण गर्नुहोस् र स्रोत-आधार-कोड-को-सबै-कुन लिनुहोस् (कुन 'क्वांटम फील्ड' भनिन्छ)। यदि यो अन्य कक्षहरूलाई असर पार्छ त्यो मात्र सम्भव छ। एआई प्रणाली जसमा हामीले बाँच्छौं (अनुभव / खेल) हामीलाई हाम्रो प्रामाणिक इकाई फारम (हाम्रो मूल एकल रचनात्मक फारम इकाई) बनाउन भाइरसको प्रणालीमा उपलब्ध छ।
यद्यपि, हामी जीवविज्ञान (हाम्रो मानव अवतारबाट) पनि जान्दछौं कि एक भाइरस प्रणाली परीक्षण गर्न त्यहाँ छ र एउटा भाइरसलाई पराजित गर्न सकिन्छ। यद्यपि टीभीको वर्तमान समयमा हामीले प्रभाव पाउँछौं कि मानव शरीरले आफ्नै आत्म-उपचार गर्ने कार्य गुमाएको छ, जुन साँच्चै गलत धारणा हो (र प्रचार पनि)। हाम्रो प्रामाणिक फारम पहिचान (हाम्रो मूल पहिलो चेतना) वायरसबाट लड्न र भाइरसको प्रणालीलाई पराजित गर्न सक्षम छ। हामी बस को सम्झना छ कि हामी जो हो। सम्झनुहोस्: तपाईं आफ्नो शरीर होइन र तपाईं आफ्नो विचारको धारा होइनन्। तपाईंको विचार AI प्रोग्राम हो जुन तपाईंको जैव-मध्य प्रोसेसर (तपाईंको दिमाग) को तंत्रिका सञ्जालमा प्रशिक्षित गरिएको छ जुन तपाईंको अवतारको माथिल्लो कोठामा चल्छ; तपाईंले यस सिमुलेशनको पर्दामा देख्नुहुने व्यक्तिलाई जसको साथ तपाई आफैलाई पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले हाम्रो प्रमाणिक एकल रचनात्मक इकाईको रुपमा सम्झना गर्दछौं भने भाइरस प्रणाली ध्वस्त भएको छ: हाम्रो मूल चेतना जुन सबैका स्टेम सेलबाट छ।
स्रोत लिङ्क सूची: zerohedge.com
"सिमुलेटेड आत्मा," "चेतना पुनर्निर्माण गर्यो," त्यो अवस्थित छ?
एलोन मास्कको नजिकको भविष्यको बारेमा सुन्नुहोस् जुन हामी अनुकरणमा अवशोषित हुन्थ्यो
पोप फ्रान्सिसले नयाँ संसार धर्मको अग्रगामी गरे
ट्याग: 2.0, मस्तिष्क, con, परि, परिभाषित, संपादित गर्नुहोस, विशेष, जीन, Hack, hacked, मानव, इंटरफेस, पुरुषहरुको, वास्तविकता, रिचर्ड, अनुकरण, नक्कली, थाइमे
22 जुलाई 2019 मा 14: 54
म डस्टे प्रभावको साथ वर्तमान सिमुलेशनको तुलना गर्दछ, हाम्रोबोरोरस जस्तै, एक खराब घटक जुन केहि थाहा छ कि कसरी को माध्यम ले तोड्न को लागी ...
22 जुलाई 2019 मा 14: 55
दर्शक निरीक्षण गरिएको छ
22 जुलाई 2019 मा 16: 38
यो मेरो पुष्टिकरण प्राप्त भएको छ, यो टिप्पणी हेर्नुहोस्
बुबाको समय (क्रोनास। सटर्न), पर्यवेक्षक मनाईन्छ..हामी एक सिमुलेशनमा बाँच्न थाल्नु भएको थियो द्विभाषी सेनाले परिणामको औचित्यको लागि प्रयोग गरिन्छ।
22 जुलाई 2019 मा 17: 19
दोहोरो लिपि (लिपि को सिद्धांत को अनुसार काम गर्दछ स्क्रिप्ट) को 'एल्टिटिस्ट अवतार' (उन अवतार जो लुसिफरियन बिल्डर्स टीम द्वारा नियंत्रित गरिएको छ) द्वारा एक दिशा मा पठाएको छ।
सम्झनुहोस्: सिमुलेशन सधैँ सिमुलेशन हो भने खेलाडीहरूले निःशुल्क छनौट गर्ने छनौट गर्नेछन्। अन्यथा यो नतीजा अग्रिममा तय गरिनेछ र यो अब अनुकार हुनेछैन, तर एक चलचित्र।
अवतार जो स्क्रिप्ट चलाउन को लागी प्रयास गर्न को लागी ड्यूटी को माध्यम ले अगाडी अगाडी खिलाडिहरु लाई स्विंग गर्नु पर्छ। यो ड्यूटीले तिनीहरूलाई केही निश्चित दिशामा चलाउँछ (जस्तै ब्याट्रीको प्लसको र मिनस पोलहरू प्रत्यक्ष सीधा उत्पन्न गर्दै)।
यसैले हामी हरेक ठाउँमा ड्यूटीलाई बुझ्न सक्छौं।
22 जुलाई 2019 मा 18: 02
"दर्शक अवलोकन गरिएको छ"
"प्रतिरोध सहयोग छ" !!
23 जुलाई 2019 मा 22: 17
22 जुलाई 2019 मा 17: 27
सबै सुन्दर कथाहरू, तर यो वास्तवमा धेरै सरल छ, बनाउन को लागि धेरै सरल र जटिल आध्यात्मिक ऊन छ, थोडा र अधिक जटिल।
यो साँच्चिकै धेरै सरल छ र सरलता मैले 1 लेखमा माथि संक्षेप गरेको छु। यसले धेरै महान् आध्यात्मिक व्याख्यान र पाठ्यक्रमहरू बचाउँछ।
हामी यस बहु-खेलाडी लुसिफेरिया भाइरस सिमुलेशनमा देखिएका खेलाडीहरू हौं। तपाईंको मौलिक आत्म सम्झनुहोस् र यो खेल हो। त्यो हो!
त्यसैले तपाईंले घटाउनुभएन वा गुमाउनु भएको छैन, तपाईं फंसनु भएको छैन, तपाई यहाँ हुनुहुन्न (र फेरि जानुपर्छ) .. तपाईसँग "यो म्याट्रिक्सबाट बचाउन" छैन। आखिर, यदि तपाईं Playstatipn खेल खेल्नुहुन्छ भने, तपाईंको मूल आत्म एक साथ सोफे मा नियन्त्रक संग हातमा छ। तपाईं अझै पनि हुनुहुन्छ र तपाई सधैँ मूल रचनात्मक फारम इकाई हुनुहुन्छ।
यसैले हामी निर्णय गर्दछौं कि यो भाइरसले स्टेम सेल घुसाउनुहोस् / संक्रमण गर्न सक्दैन। अब हामीले निर्णय गरेका छौं किनभने हामी यसको माध्यम ले देख्छौं।
22 जुलाई 2019 मा 17: 34
त्यसोभए हाम्रोबोरोस प्रभावको भ्रम यस तरिकामा सिर्जना गरिएको छ:
22 जुलाई 2019 मा 17: 40
पुनर्जन्मको खराब चक्रको भ्रमले निर्माण गर्न सजिलो भएको छ। लुसिफरियन बिल्डर्सहरूले अनुकरणमा अनुकार सिर्जना गरेर। त्यस लेखको तल टिप्पणीहरू पनि हेर्नुहोस्।
आध्यात्मिक संसार त्यहाँ छ र गुरुहरू हामीलाई सत्यबाट टाढा राख्न र हामीलाई विश्वास छ कि हामी वास्तवमा यहाँ छौं। यदि तपाईंले देख्नुहुन्छ कि हामी सिमुलेशनलाई बुझ्दछौं (भले यो सिमुलेशनहरू-इन सिमुलेशनहरू हो भने), हामी यो हो कि हामी वास्तवमा IN हुन सक्दैनौं, तर यो मात्र थाहा छ। पर्यवेक्षक अझै पनि त्यहाँ र नियन्त्रणमा छ।
यो काम छ कि अवतार दिमागलाई थाहा छ।
22 जुलाई 2019 मा 18: 18
हामी अब थाहा छ। मलाई लाग्छ कि तपाइँका लागि पहिलो पाठकहरू, चिरोन अन्तिम द्वारा यूट्यूब चलचित्रहरू आँखा-ओपनर हुन सक्छन्।
एक शुरुआत को रूप मा, यो तपाईं सबै को शामिल गर्न को लागि एक शुरुवात गर्न मा मदद गर्न सक्छन्। उसले राम्रो बताउँछ कि दोहोरो भाग लिन को लागी केहि छैन किनकी तपाईं यस अनुकार (प्रतिरोध सहयोग) को बनाए राखन को लागि।
मलाई एक लामो समय को लागी केहि वर्ष पहिले (जब मैले पहिले देखि उनको सुनहरा वेब श्रृंखला देख्यो) को बारे मा सोचना थियो ... ... मलाई पनि उनलाई 15 पल्ट हेर्नु पर्दछ।
अब अन्धकारमा काटिएको छ (हाम्रो लागि) तर कसैको लागि जो यो अन्वेषण गर्न जाँदै छ निश्चित रूपमा धेरै मूल्यवान हुन सक्छ ..
hans coudyser लेखे:
22 जुलाई 2019 मा 19: 25
यसले यो सावधानी पढ्न एक घन्टा भन्दा बढी समय लिनुभयो।
लेंस पछि मेरो अस्तित्वमा टोपी हटाइयो।
प्रायः म यो अनुभव गर्दछु कि मैले / यो पृथ्वीमा यसका लागि यो मूल लिपि लेखेको छु - जब सम्म यो यहाँ प्रतिकृति छैन - र यो कुरा हाम्रो उत्पत्ति नै हो कि यो एक तरिका मा या 'अधिलेखन' यो थाहा छैन वा यस स्थितिबाट यो एडम एडएम कसरी देख्न सक्दैन।
के यो मेरो उत्पत्तिलाई सूचित गर्न धेरै म के गर्छु। यदि मेरो मतलब - मेरो मौलिकता को एक अनुकरण अनुकार मा - म अधिक खर्च नहीं हुनेछ - बिना उस मौलिकता को पकडने को बिना यो यो सिमुलेशन देखि गरिन सक्छ।
22 जुलाई 2019 मा 22: 12
तपाईले भनेको छ कि हामीले लुसीफेरियन भाइरसको प्रणालीलाई दयालु चुनौतीको अर्थमा लेख्नुभयो?
मलाई थाहा छैन यदि म तपाईंलाई सही बुझ्छु।
तपाईं के भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईलाई फेरि के बुझाउन सक्नुहुन्छ?
23 जुलाई 2019 मा 00: 50
@ ह्यान्स, थाइमेले पहिले नै यसलाई आफ्नो विभाजन लुकाइरहेका भाषाको साथमा एक प्रस्तुतिको रूपमा Mbibius पट्टी प्रयोग गरेर आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा बताउँछ।
एक वस्तु जो मोबिभस-पट्टीको आकारको ब्रान्डमा अस्तित्वमा रहेको छ, यसको आफ्नै आईना छविबाट असंगत हुनेछ - यो फिडलर क्रैबहरू ठूलो चक्र हरेक सर्कलसँग बायाँदेखि दाँया बीच स्विच गर्दछ। यो असंभव छैन कि ब्रह्मांडले यो सम्पत्ति हुन सक्छ, गैर-उन्मुख वार्महोल हेर्नुहोस्
23 जुलाई 2019 मा 00: 56
23 जुलाई 2019 मा 06: 11
पृथ्वी वा पृथ्वीमा रहन अधिक वा कम यसैले हामीले आफूलाई लेखेका छौं। लुक्फेरेरिया कार्यक्रम 'ओभर' हो त्यहाँ एक भाइरसको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ - त्यसैले तपाईं द्वारा वर्णन गरिएको, डियल्टी आदि सहित ... आफैलाई लेखिएको - 'बलियो' गर्न। यो अलग मूलबाट आउँछ यसको आफ्नै स्वायत्त चासो। हाम्रो मौलिकतामा यसको नियन्त्रण छैन र यो आदिबाट लाभ उठाउँछ ... - केवल? - यो सिमुलेशनबाट - सिमुलेशनमा - यो हेर्न सकिन्छ। भाइरस हाम्रो डिजाइनबाट डिजाइनमा लिन्छ
23 जुलाई 2019 मा 09: 24
पृथ्वी वा पृथ्वीमा रहन अधिक वा कम यसैले हामीले आफूलाई लेखेका छौं। लुक्फेरेरिया कार्यक्रम 'ओभर' हो त्यहाँ एक भाइरसको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ - त्यसैले तपाईं द्वारा वर्णन गरिएको, डियल्टी आदि सहित ... आफैलाई लेखिएको - 'बलियो' गर्न। यो अलग मूलबाट आउँछ यसको आफ्नै स्वायत्त चासो। हाम्रो मौलिकतामा यसको नियन्त्रण छैन र यो आदिबाट लाभ उठाउँछ ... - केवल? - यो सिमुलेशनबाट - सिमुलेशनमा - यो हेर्न सकिन्छ। भाइरसले हाम्रो डिजाइनबाट यसको डिजाइनमा लिन्छ र यसको माध्यमबाट अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्न प्रयोग गर्दछ। यो भाइरस प्रणाली 'बलियो' गर्न डिजाइन गरिएको छैन, यो यसको परिणाम राम्रो तरिकामा छ। एक पृथ्वी हाम्रो द्वारा लेखिएको छ, बस हामीलाई प्रयोग गर्न र अजीब गर्न। त्यहाँ कुनै प्रतिरोध छैन, दोहोरो कार्यक्रमलाई यो अनुभव गर्न आवश्यक छ। यो अवधारणा 'यसमा राखिएको' थियो।
23 जुलाई 2019 मा 10: 26
त्यो पनि एक विकल्प हो। यो पनि सम्भव छ कि लुसिफरले हामीलाई एक पटक बनाएको एक प्रतिलिपि बनाएको छ।
कुनै कुरामा तपाइँ यसलाई कसरी बदल्नुहुन्छ वा यसलाई घुमाउनुहोस्, यो प्रकृतिमा लुसिफरियन हो र तपाईले यसलाई कसरी बदल्नुहुन्छ वा यसलाई बदल्नुहुन्छ, हामी यसलाई "सिम स्तरमा" समाधान गर्दैनौं।
23 जुलाई 2019 मा 10: 45
म तपाईंका शब्दहरूबाट ध्यान दिनेछु कि तपाईं "पृथ्वीमा जीवन" को अवधारणामा रहन चाहानुहुन्छ। हामी पृथ्वीमा बाँचिरहेका छौं। तपाईंले आफूलाई "आजीवन भावना" अनुकारको रूपमा पहिचान गर्नुभएको छ।
यो तपाईंको दिमाग ए प्रोग्राम हो (जसलाई 'अहं' भनिन्छ) जुन त्यो अवधारणामा रहन चाहन्छ।
यसलाई जानुहोस्: तपाईं एक विदेशी पर्यवेक्षकको रूपमा बहु-सिमुलेशन सिमुलेशनमा भाग लिनुहुन्छ। तपाईं पृथ्वीमा बाँचिरहनुहुन्न। पृथ्वी र ब्रह्माण्ड अवस्थित छैन। यो एक सिमुलेशन हो!
23 जुलाई 2019 मा 12: 23
राम्रो, राम्रो लेख। दुर्भाग्यवश यो ज्ञान 'धरती' को लागि आरक्षित छैन। यो सिमुलेशनमा शत्रुहरूको आप्रवासी 'कुलीन' उपकरण, कामदार, उपकरण, 'पृथ्वी' को रूपमा कार्य गर्दछ। यदि हामी केवल शत्रुमा आफूलाई अपलोड गर्न शत्रुवासी आप्रवासी 'कुलीन' समझाउन सक्छौं। तर दुर्भाग्यवश तिनीहरूले स्वेच्छाले त्यसलाई यस पार्थिव अनुकारमा आफ्नो प्रमुख पदहरू मार्फत सुविधा र फाइदा दिएनन्।
« के एलोन मुस्किलसँग ट्रान्सगेंडर व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ? यहाँ यी ग्रिमहरूको संगीत अध्ययन गर्नुहोस्
Pedophile Jeffrey Epstein को neuroscientific अध्ययनहरू गहिरो विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एआई नेटवर्कमा एकीकृत हुन्छन् »
कुल भ्रमण: 13.858.461
तपाई किन यो जान्न चाहानुहुन्छ? op छापा सुरु भयो? साइंसलाई एलेन बोर्स्ट / बार्ट भ्यान यू केसमा आधारित 2018 मा साइकोल्यान्सलाई पहिले नै हरित प्रकाश दिइयो
guppy op नाजी जर्मनी भन्दा नराम्रो पुलिस राज्य भेडाको लुगामा ब्वाँसो जस्तै देखिन्छ र तपाईंले देख्नुहुन्न
SandinG op नाजी जर्मनी भन्दा नराम्रो पुलिस राज्य भेडाको लुगामा ब्वाँसो जस्तै देखिन्छ र तपाईंले देख्नुहुन्न